Hungary Ihhotela likuvumela hhayi kuphela ukuzijabulisa, kodwa futhi Ngcono
E-Hungary kukhona izinqaba eziningi ezinhle izikhumbuzo ahlukahlukene itshe basendulo. Abavakashi ebavakashele ukunikela charm eyiqiniso Ephakathi. Ngaphezu ngokuvakashela izikhumbuzo zomlando ezithakazelisayo Hungary inikeza amathuba amahle kakhulu ukuzijabulisa, elikwaziyo ukushiya ngokwayo kwalibaleka. Kukhona ephulukisa amanzi ezishisayo kanye echibini omangalisayo Balaton.
Zonke izihambi futhi izivakashi amahhotela ezweni Hungary ukunikela ngemisebenzi nezikhungo ezahlukene, kodwa izwi elazwakala alibazuzisanga, ukukhalipha kokuvamile izihambi. Cishe wonke amahhotela Hungarian kungaba kusimangaze iyiphi gqamisa izivakashi: eyodwa ine isevisi spa kwenye zokugeza amahle amanzi ezishisayo, ku yesithathu neyesine ukuzingela okuthakazelisayo noma ukudoba, ngenyanga yesihlanu ifanelwe incazelo ehlukile iwayini. mncintiswano eyishumi omnene amahhotela Hungarian, futhi bayazi kahle kamhlophe ukuthi ongakunika izivakashi zayo.
Amahhotela ephezulu akuzona ezishibhile, kodwa kungenye into ehluke kakhulu ethandwa phakathi izivakashi. Lokhu emahhotela aphambili Sorinthia Aquincum, Le Meridien, Hyatt Regency futhi Andrassy. Ngokuvamile, lezi amahhotela zenzelwe hhayi kuphela ukuchitha iholide eHungary, kodwa futhi ngoba yebhizinisi kanye nemihlangano. Abakwazi isebenze kahle: ubambela umhlangano noma ingqungquthela, umhlangano ibhizinisi endaweni amakamelo kahle esimisiwe ifakwe ubuchwepheshe bamuva. Nokho, nemazinga etinhlelo e-amahhotela amane inkanyezi, uma sihlaziya izibuyekezo mayelana amahhotela e-Hungary, kancane ngezansi star emihlanu. Ezinye amahhotela ngokukhethekile bakuthathe kalula isimo sabo (ukuze sigweme ukukhokha izintela okusezingeni eliphezulu), kanye nekhwalithi yesevisi uhlala aphakeme.
Kulezi amahhotela bungabonakala Budapest, Golden Park, Liget, Fiesta futhi Benczur Golden Park. Lezi amahhotela zitholakala maphakathi Budapest ngakhoke ekahle kakhulu izivakashi. Ngaphezu amahhotela kanye yezihambi e Budapest kuyinto zithandwa ezindlini eziqashisayo kanye amakamelo e boarding izindlu. Ukuze eziningi intsha amahostela mikhulu ezishibhile "isivakashi izindlu" - ajwayelane ngakho analogue enziwa izindawo zokulala. Abakwazi kalula isuselwa embhedeni ebusuku, futhi ngosuku olulandelayo uhambo oluya wokungenisa izihambi Hitchhiking Hungarian.
Abaningi amahhotela Hungary ngaphezu ekuhlinzekeni yokuhlala nokudla masevisi anikela izivakashi zayo ukuthi kukhona Sanatoriums esingokwemvelo, njengoba leli lizwe linazo inqwaba imithombo yamanzi amtoti ashisayo nabandayo. Ezinye izihambeli ehhotela ngisho baxwayisa ngokuthi ompompi esikhundleni amanzi evamile empompini enikeziwe amanzi ashisayo kusukela imithombo yamanzi amtoti. Sekuyisikhathi eside izinkonzo ezinjalo namasevisi spa saphela exotic futhi atholakale izivakashi mahhala.
The resort ezidumile Hungary Izifunda uqokomisa Lake Balaton nasezindaweni ezizungezile. Kuyamangalisa ukuthi lapha nazo zonke ukujula ukukhetha, akukho ehhotela aphambili futhi wonke amahhotela ezintathu isigaba 4 Stars: Club Tihany, Panorama ne Flamingo. Nokho, amahhotela zendawo izigaba Hungary 2 no-3 izinkanyezi on European ngezigaba umsebenzi oncomekayo izinsizakalo izivakashi zabo, njengoba ukugeleza izivakashi at Lake Balaton cishe never-ophela. Balaton inikeza izivakashi okuthulile eziphumulele umndeni iholide, kanye ngelashwa, njengoba kuqhathaniswa nezinye izindawo zokungcebeleka nasemizini Hungary, zokuzijabulisa egqamile futhi enchanting.
Okusanda eHungary, ukuthuthukisa entsha ezokuvakasha mkhuba - kuba ezokuvakasha green. Kakade, kwathi angamakhulu amaningana encane amahhotela yangasese kanye nezindlu etholakala ezindaweni eziluhlaza, iyakwamukela izivakashi zayo ukuvula iminyango yabo eHungary. Kuleli zwe, izivakashi uthole okuningi amathuba iholide okuhle, akekho ophikayo ukuthi lonke Hungary, ngibashiye injabulo ongenakulibaleka.
Cyprus, Seagull Ihhotela Apts 3 *. Izibuyekezo
Emahhotela aphambili e Yakutsk: Ukubuyekezwa nezithombe
Emahhotela aphambili e Bishkek
Angina ingane ukuthi yini okufanele uyenze?
Uyini goulash? Goulash nge sauce: iresiphi ngesithombe (igxathu negxathu)
Ama-headphone Bowers Wilkins P5 Wireless: izithombe kanye nokubuyekeza amakhasimende
Tactical flashlight - izinhlobo futhi isicelo
Cream imifino - main dish ehlobo